Ifulethi elihle kwindawo yokuhlala ephezulu eAlgiers - I-Airbnb
Ifulethi elihle kwindawo yokuhlala ephezulu eAlgiers
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe onguMehdi
Indawo entle enamagumbi amabini eCheraga enazo zonke izinto eziyimfuneko zokuhlala kamnandi eAlgiers. Le ndlu ibekwe kumgangatho ophantsi ijonge kwigadi entle encinci enomthamo wokuya kuthi ga kwi-4 abantu, ilungele abahambi beshishini kunye neentsapho ezincinci. Le ndlu ikwindawo yokuhlala yase-Al Jazi, enye yezona ndawo zintle kwi-Place d'Alger, igadiwe kwaye igcinwe iiyure ezingama-24 ngosuku, ukungena ngekhadi kunye nekhowudi yedijithali kunye neendawo zokupaka.
Indawo yokuhlala ikhuselekile (Isango lokungena elinomagnetic card), lihle kwaye lizolile kakhulu lineendawo zokupaka, amabala okudlala abantwana kunye ne-esplanade, iholo lezemidlalo, iphuli yokuqubha yangaphakathi esemi-Olimpiki kunye neendawo ezininzi eziluhlaza.
Isakhiwo sicocekile kwaye sineminyango emibini enekhowudi yedijithali. Kukho iivenkile ezimbalwa kumgama wokuhamba, iindawo zokutyela, imarike enkulu ye-UNO, iindawo zokutyela, indawo yokuzivocavoca, iCheraga egutyungelwe yimarike, i-fishmonger, ikhemesti ... njl.
Zininzi iindawo zokuzonwabisa ezikufutshane ezinje ngeKarting, iipaki ezincinci zokuzonwabisa zabantwana, iivenkile ezinkulu zohlobo (Tomy, Lacoste, Nike, Converse, Mango ... njl.
Ukwanayo nentengiso egqunyiweyo yeCheraga ukuze ufumane iziqhamo ezitsha kunye nemifuno.
I graw up in Algiers , did my masters in England ( Queen Mary University of London and Kent Buisiness School) , worked as a consultant in Paris and now I live an entrepreneur experience between Paris and Algiers . I like to visit new places and meet new people. I am an easy going person who likes to have fun :-)
I graw up in Algiers , did my masters in England ( Queen Mary University of London and Kent Buisiness School) , worked as a consultant in Paris and now I live an entrepreneur exper…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Chéraga